Nụla ebe a na-ekwu, Ọdịnaya bụ Eze. Ekwetaghị m na nke ahụ gbanwere, ekwetaghịkwa m na ọ ga-eme. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ede banyere ngwaahịa na ọrụ ha, nwetara ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ede banyere ha, kesara ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ekerịta ha, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-akwalite ha… ọ bụ ọdịnaya na-eme ka ikike, ikike, na mkpebi mkpebi.
Nsogbu na-abịa mgbe onye ọ bụla nọ n'okwukwe ahụ ha ọdịnaya bụ eze. Ka anyị kwuo eziokwu, ọtụtụ ọdịnaya dị egwu. Ọ na-abụkarị mmepụta-ahịrị, ọdịnaya na-adịchaghị adị nke na-enweghị akparamagwa, akụkọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla iji gosi ọdịiche dị na ya. Ma ọ bụ ọ bụ ire ahịa-ikwu okwu, ihe jikọrọ ọdịnaya nke a na-agbadata site na ọkwa ọchịchị na micromanagement.
Ma, n'ezie, okwesighi maka okpueze. Ọdịnaya gị enweghị ike ịbụ eze belụsọ ma ọ bụrụ na ọ pụrụ iche, dị ịrịba ama, ma merie n'ọgụ ahụ. Chọrọ ịbụ Eze? (Ma ọ bụ Queen - ọdịnaya enweghị okike). Lee ụfọdụ ndụmọdụ:
Ejiji akụkụ - Eze anaghị eyi uwe onye nkịtị, a na-achọ mma ya na nkume dị oke ọnụ, ọla dị oke ọnụ na akwa mara mma. Kedu ka ọdịnaya gị si ele?
Nye iwu n'ụlọ ikpe gị - Eze anaghi ari nwayo. Ọ naghị agba izu n'okwu ya, ọ na-ekwupụta ha site na olu ya. Ọ tụkwasịrị onwe ya obi. Ọ bụ ọdịnaya gị?
Nye onyinye dị oke egwu - Agbata obi alaeze bụ nanị ole na ole gold mkpụrụ ego pụọ. Atụla egwu imebi eze na alaeze ndị agbata obi ya site na onyinye dị oke mma. N'aka ozo, King Zuck nwere otutu ndi na - ege nti - nye ya ugwo!